शहर बन्दै बनियानी बजार « Sajilokhabar
शहर बन्दै बनियानी बजार
झापा, २ भदौ । नेपालको होचो गाउँपालिका कचनकबलको केन्द्र बनियानी बजार शहरको रुपमा बिकास हुँदै गएको छ । नेपालको सुदूर पूर्वदक्षिणमा रहेको कचनकबल गाउँपालिका साविकका केचना, बनियानी, पथरिया, घेराबारी, पाठामारी र बालुबाडी गाबिस समायोजन गाउँपालिका बनेको हो ।
बनियानीबाट झापाको सदरमुकाम भद्रपुर १५ किमी र भारतीय सीमा नाका केचना पुग्न ७ किमी दुरी छ । दक्षिण र पूर्वमा भारतीय सीमा पर्दछ । गाउँपालिकाको केन्द्र बनेपछि बनियानी बजारको बिस्तार झन तिब्र गतमा हुन थालेको छ । वडा नम्बर ६ मा रहेको बनियानी बजार ग्रामिण शहरमा रुपान्तर हुँदै गएको छ ।
मेची राजमार्गमा जोडिएको बनियानी बजारबाट बिर्तामोड, भद्रपु आउजाउ गर्न सहज भएको छ । आसपासको ग्रामिण क्षेत्रबाट बनियानी बजारमा बर्षेनी घर बनाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
बनियानी बजारले शहरीकरणसँगै मुख्य सडक आसपासका जग्गाको मूल्य वृद्धि भएको छ । मुख्य सडकका जग्गा प्रति धूर ५ देखि ६ लाखसम्म पर्ने गर्दछ । गाउँपालिका केन्द्र र मेची सडक निर्माणले बनियानी बजारको मूल्य वृद्धि भएको हो ।
गरिमा बिकास, एनआईसी एशिया, एक्सल लगायतका बैंकका शाखा संचालनमा छन् । एक नाडेप, नागबेली, जीवनबिकास, साना किसान, फरवार्ड गायतका दश भन्दा बढी लघु बित्त संस्थाका शाखा कार्यालय छन् ।
सहारा, एनएमसी, कर्णाली, सिम्रिक, प्रथम बहुउद्देश्य जस्ता ठूला सहकारीका पनि शाखा कार्यालय खुलेका छन् । एक दर्जन भन्दा बढी स्थानीय सहकारी संस्था संचालनमा छन् ।
लत्ता कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न जस्ता दर्जनौँ पसल संचालनमा छन् । पाठमारी, केचना, बालुवाडी, घेराबारी, पथरिया र पृथ्वीनगरको दक्षिणी क्षेत्रको मुख्य बजार बनियानी हो ।
एक सामुदायिक क्याम्पस, तीनवटा सामुदायिक र तीन वटा निजी उच्च माबि तहको पठनपाठन हुने विद्यालय छन् । धान सूपर जोनको कार्यालय पनि यहि बनियानी बजारमा छ । प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाका प्रहरी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, लक्ष्मी क्याम्पस गाउँपालिकाका मुख्य कार्याय यहि बनियानीमा रहेका छन् ।
बनियानी बजारले ग्रामिण शहरको आकार ग्रहण गरेको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, कस्मेटिक, मोटरसाइकल, ट्याक्टर स्वरुम लगायतका व्यवसयिक थोक बिक्री केन्द्र खुलेका छन् । यहाँ हरेक शुक्रवार र सोमबार बजार लाग्ने गर्दछ ।
बजारको दिन भद्रपुर, बिर्तामोड लगायतका स्थानबाट व्यापारी आउने गर्दछन् । कचनकबलको मुख्य उत्पादन धान, गहुँ र मकै हो । धान उत्पादनको समयमा धान ठूलै कारोबार हुने गर्दछ ।
झापा, २१ भदौ । नेपालको होचो गाउँपालिका कचनकबलको वडा नम्बर ५ मा मेची नदिको बाढी
काठमाठौँ, २० भदौ । प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले न्युज २४ का पत्रकार दिपक
इटहरी , १८ भदौ । नेकपाको इटहरी उपमहानगर कार्यालयमा तालाबन्दी भएको एक हप्ता भएपनि खुल्न
प्रदेश सरकारको ५० लाख कता हरायो ? बोटिङ गर्ने पोखरीमा किरा करायो !
झापा, १६ भदौ । नेपालको सबै भन्दा होचो स्थान कचनकबलको पर्यटन बिकासका लागि प्रदेश सरकारबाट